Maungnaing's Blog | Just another WordPress.com site
Football is football – nothing is granted until the referee blows the final whistle. Like Adidas’ motto, “Nothing is impossible”, so anything can happen.
Manchester United’s dream of treble like the one in 1999 has shattered when Manchester City defeated them in the semi-final of the FA Cup at Wembley. Berbatov’s misfiring, Carrick’s clumsiness, Scholes’ reckless tackle and last, not least, Rooney’s suspension, all sent City to the final in May 14.
Berbatov’s misfiring – If you’re facing one on one with the keeper, it isamust score situation and he should have scored against Joe Hart. If he had done that, there’s no doubt United would have been in driving seat. But it’sashame that he couldn’t take his chances in this game. So, it is as simple as that if you don’t take your chances, you’ll have to pay for that. I don’t know whether it’s just his luck or his match sharpness. He has done quite well this season and scored most goals in the premier league but that doesn’t granted him in the first place. I think his style of play cost him not to getaregular starter in the United squad. Although his technique, instinct and genius made him one of the top strikers in Europe, his playing style looks like that he’s justalaid back person or not playing hard enough for his team. I think that makes Ferguson doensn’t always rely on him in big matches. Since he’s not playing regularly, there’s nothing to doubt that his form will be on and off like this. His misfiring opportunities truly cost the FA Cup.
Carrick clumsiness – Losing the ball just outside of the penalty area right infront of his own goal is committing suicide. Recently, he’s been playing for United quite regularly because many other players are injured. But his movement, passing and vision are jaded and looks like he’s not match-fit. His defensive skill and holding the ball in the middle of the park are not that great and that makes Unitedahole in central midfield and opposition teams are taking advantage of this. Fergie should drop him unless he finds his best form. But it is very understandable why Ferguson use him. The answer is – he doesn’t have any player to fill that gap right now as many of them are injured. If I were in Fergie’s shoes – I would drop Carrick and put Darron Gibson for defensive midfield. He has to gamble it. If Carrick or the whole United team keep playing like this, I’m sure they will haveareal problem against Schalke 04 in Champions League semi-final and they might have to say goodbye to the Final in Wembley, again.
Scholes’ reckless challenge – It’s nothing strange to see Paul was sent-off like this. Many great footballers, present and the past, agree that’s he one of the most complete footballers (midfielders) in modern football. Yes, it’s true. His genius, his techniques, visions, passings, match understandings, goal scoring with both his head and legs, control of the game has made him one of the greatest players of the English football history but his tackles are some of the worsts and which made him miss many important games, including UEFA Champions League final match against Bayern Munich in 1999. After trailing one goal, it’s become more difficult for United when he was sent-off. It made United an uphill battle against their neighbour. If he was not sent-off, things could bealittle different in the final stages. So, it will be much better for United if he stops tackling around.
Rooney’s suspension – If Rooney had been wise or mature enough, he wouldn’t be banned and would definitely start this match. That would be more difficult and danger for City for sure. He’s one of the few players, who can do the miracles during the game. Remember, the game against Man City at Old Trafford ??? Although he’s not at his best, he’s that kind of player and create unbelievable things during the match.
Anyway, United’s dream of winning the treble again is gone and rightly so they don’t have the squad to win the treble this year. So, they just need to concentrate on remaining two trophies. If they want to win, they need to tighten the midfield and need to be ruthless in front of the opponent’s goal.
ကာတာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာရှဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ စနေနေ့က ကစားသွားတဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ သြစတြေးလျအသင်းက လက်ရှိချန်ပီယံ အီရတ်အသင်းကို အချိန်ပိုမှာ ၁ ဂိုး ဂိုး မရှိ နဲ့ နိုင်သွားပါတယ်။ သြစတြေးလျအသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးကို Harry Kewell က ပွဲပြီးခါနီး ၃ မိနစ်မှာ သွင်းခဲ့တာပါ။
တခြားပွဲမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားအသင်းက အီရန်အသင်းကို အချိန်ပိုမှာ သွင်းတဲ့ ၁ ဂိုး တည်း နဲ့ နိုင်ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်သွားပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားအသင်းအတွက် ဂိုးကိုတော့ ၁၀၇ မိနစ်မှာ နံပါတ် ၈ ဘစ်ဂါရမ်က သွင်းသွားခဲ့တာပါ။
ဆီးမီးဖိုင်နယ်မှာတော့ သြစတြေးလျ နဲ့ ဥစဘက်ကစ္စတန် ၊ တောင်ကိုရီးယား နဲ့ ဂျပန် တို့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် (Old Trafford) မှာ စနေနေ့က ကစားသွားတဲ့ အင်္ဂလန်ပရီမီယာလိဂ်ပွဲမှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် (Manchester United) က ဘာမင်ဟမ်စီးတီး (Birmingham City) ကို ၅ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ နိုင်သွားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်တွေက ဘာမင်ဟမ်မှာ ကစားသွားတဲ့ပွဲမှာ ပွဲပြီးခါနီးမှာ ချေပဂိုးပေးလိုက်ရပြီး သရေကျသွားတာကြောင့် ၂ မှတ် နစ်နာခဲ့တဲ့အတွက် မန်ယူဟာ ရှေ့တန်းမှာ ဘာဘာတော့ဗ် နဲ့ ရူနီတို့ကို ထားပြီး၊ ဂစ်စ် နဲ့ နာနီးတို့က တောင်ပံကနေကစားပြီး ၄-၄-၂ ပုံစံနဲ့ ကစားသွားပါတယ်။
မန်ယူအတွက် ပထမ ဂိုးကိုတော့ ဘာဘာတော့ဗ် (Berbatov) က ပွဲအစ ၂ မိနစ်မှာပဲ ညာဘက်နေ ရိုင်ယန်ဂစ်စ် ပြစ်ဒဏ်ဘောကတဆင့်တင်ပေးတာကို ခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့လို့ မန်ယူ ပထမဂိုးရသွားပါတယ်။ ပထမပိုင်း ၃၁ မိနစ်မှာ ၀ိန်းရူနီ ထိုးပေးတဲ့ ဘောလုံးကို ဘာဘာတော့ဗ်က ဆွဲပြီးသွင်းခဲ့တာကြောင့် ဒုတိယဂိုးရသွားပါတယ်။ တတိယဂိုးကိုတော့ ၀ိန်းရူနီ နဲ့ ဘာဘာတော့ဗ်တို့ အပေးအယူလုပ်ပြီးတော့ ရူနီ ညာဘက်ကနေ ဂိုးရှေ့ချပေးလိုက်တာကို ရိုင်ယန်ဂစ်စ် (Ryan Giggs) က ပိတ်သွင်းခဲ့တာကြောင့် ပထမပိုင်းမပြီးခင်လေးမှာပဲ တတိယဂိုးရသွားပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ၅၃ မိနစ်မှာတော့ ရူနီထိုးပေးတဲ့ ဘောလုံးကို ရိုင်ယန်ဂစ်စ်က ဂိုးရှေ့ကို ထပ်ပြီးချပေးလိုက်တာကို ဘာဘာတော့ဗ်ပိတ်သွင်းတဲ့ ဟက်ထရစ်ရသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာဘာတော့ဗ်အတွက် ပရီမီယာလိဂ်မှာ သူဟာ ၁၇ ဂိုးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိန်းရူနီဟာ ဒီပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၃ ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်အသင်းဟာ ဒီပွဲအနိုင်ရသွားတဲ့အတွက် ၂၂ ပွဲမှာ ၄၈ မှတ် နဲ့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။
စနေနေ့က ကစားသွားတဲ့ အင်္ဂလန်ပရီမီယာလိဂ်ပွဲတွေမှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် (Manchester United) က ဘာမင်ဟမ်စီးတီး (Birmingham City) ကို ၅ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ နိုင်သွားပါတယ်။ မန်ယူအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ ဘာဘာတော့ဗ် (Berbatov) က ၃ ဂိုး၊ ရိုင်ယန်ဂစ်စ် (Ryan Giggs) နဲ့ နာနီး (Nani) တို့က၁ ဂိုးစီ သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာဘာတော့ဗ်ဟာ ဒီပွဲမှာ ဟက်ထရစ် (Hat-trick)ရသွားတဲ့အတွက် အခုဆိုရင် ပရီမီယာလိဂ်မှာ သူဟာ ၁၇ ဂိုးနဲ့ ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားပါတယ်။
အာဆင်နယ် (Arsenal) နဲ့ ၀ီဂန် (Wigan Athletic) ပွဲမှာတော့ အာဆင်နယ်က ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ နိုင်သွားပြီး၊ ဟော်လန်တိုက်စစ်မှူး ရော်ဘင် ဗန်ပါစီ (Robin Van Persie) တစ်ယောက်ထဲက ၃ ဂိုး စလုံးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာ လီဗာပူးလ် (Liverpool) က ၀ုလ်ဖ် (Wolves) ကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ နိုင်သွားတာကြောင့် နည်းပြသစ် ကန်နီ ဒေါဂလစ်ရှ် (Kenny Daglish) အတွက် ပရီမီယာလိဂ်မှာ ပထမဆုံးနိုင်ပွဲရသွားပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဖာနန်ဒို တောရက်စ်က ၂ ဂိုး မရဲလက်စ် က ၁ ဂိုး သွင်းခဲ့ပါတယ်။ တခြားပွဲတွေမှာတော့ ဆန်းဒါးလန်းက ဘလက်ပူးလ် ကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုး၊ ဖူးလ်ဟမ်း (Fulham United) က စတုတ်ခ်စီးတီး (Stoke City) ကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ နိုင်ပြီး တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး (Tottenham Hotspur) နဲ့ နယူးကာဆယ် (Newcastle United) က ၁ ဂိုး ၁ ဂိုး၊ အဲဗာတန် (Everton) နဲ့ ၀က်စ်ဟမ်း (West Ham United) တို့ ၂ ဂိုး စီ သရေကျသွားပါတယ်။
အခုဆိုရင် မန်ယူက ၂၂ ပွဲမှာ ၄၈ မှတ်၊ အာဆင်နယ်က ၂၃ ပွဲမှာ ၄၆ မှတ်၊ ချယ်ဆီးက ၂၂ပွဲမှာ ၃၈ ၊ တော့တင်ဟမ်က ၂၃ ပွဲမှာ ၃၈ မှတ် ရထားပါတယ်။
ကာတာနိုင်ငံရဲ့ ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု နဲ့ တိုင်းပြည်အရွယ်အစားသေးတာတွေကြောင့်၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို တခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အတူတွဲပြီး၊ ဆောင်းရာသီမှာ ပြောင်းလဲကျင်းပသင့်တယ်လို့ အကြံပေးချက်တွေကို ကာတာနိုင်ငံဖွား အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ မိုဟာမက် ဘင်ဟာမန်း က လက်မခံဘဲ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် မစ္စတာ ဘင်ဟာမန်းက – ကာတာနိုင်ငံအနေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအားလုံးကို ရင်ဆိုင်သွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကျင်းပနေကြ – ဇွန် နဲ့ ဇူလိုင်လ တွေကနေ တပတ်ကျော်ပြီး ကျင်းပဖို့တောင် ကာတာနိုင်ငံက စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ Sky သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံရဲ့ ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီအပူချိန် ကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ဆောင်းတွင်းမှာ ပြောင်းလဲကျင်းပဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဆပ်ဘလတ္တာ က သတင်းထောက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း၊ ကာတာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က အချိန်ပြောင်းဖို့ မတောင်းဆိုရင်တော့၊ သူတို့အနေနဲ့ ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ မစ္စတာ ဘလတ္တာ က ပြောပါတယ်။
ကာတာနိုင်ငံဟာ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ထဲက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ အတူတွဲပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကျင်းပကောင်းကျင်းပနိုင်တယ်လို့ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ မီချဲလ် ပလာတီနီ က အခုသီတင်းပတ်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအယူအဆကို မစ္စတာ ဘင်ဟာမန်း က လက်မခံဘဲ၊ ကာတာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို တနိုင်ငံတည်း ကျင်းပသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
Filed under: Brief News — Leaveacomment
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းက တိုဂိုတိုက်စစ်မှူး အီမယ်နျူရယ်လ် အာဒီဘာရောကို ၀ယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ သူ့အနေနဲ့ အက်စ်တွန်ဗီလာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စဉ်းစားရလိမ့်မယ်လို့ ရီးယဲလ်အသင်းက ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှူး ကာရင်မ် ဘန်ဇီးမားက ပြောလိုက်ပါတယ်။
တော့တင်ဟမ်တိုက်စစ်မှူး ရောဘီကီးန်းကို ပေါင် ၆ သန်း နဲ့ ၀ယ်ဖို့ ဘာမင်ဟမ်စီးတီးအသင်းဘက် ကမ်းလှမ်းလိုက်တာကို တော့တင်ဟမ်အသင်းက သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
ဘာမင်ဟမ်အသင်းက ပေါင် ၄ သန်း အရင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ၊ နောက်ပိုင်းမှာမှ ပေါင် ၂ သန်းကို ပေးသွားရမှာပါ။
အာဆင်နယ်ဂိုးသမား မန်နျူရယ်လ် အလ်မူးနီးယား နဲ့ တိုက်စစ်မှူး အန်ဒရေ အာရှာဗင်တို့ ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပေမယ့်လည်း ၊ နည်းပြ အာဆင်ဝင်းဂါးက သူ့အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေကို သူ့အနေနဲ့ ထိန်းထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
မန်နျူရယ်လ် အလ်မူးနီးယား (Manuel Almunia) ဟာ ပုံမှန်ပထမဂိုးသမားနေရာမရဘဲဖြစ်နေတာကြောင့် ၊ တူရကီက ဂါလာတာဆာရေးအသင်းကို ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး၊ ရုရှားတိုက်စစ်မှူး အာရှာဗင်ဟာလည်း ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့ ပုံမှန်နေရာမရတာကြောင့် အီတလီ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အာဆင်ဝင်းဂါးက အခုချိန်မှာ ကစားသမားတွေ ရောင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဖီဖာ (FIFA) ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဆပ်ဘလတ္တာ (Sepp Blatter) က စပိန်လာလီဂါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဖီဖာက ရွေးချယ်တဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် နေရာအလိုက် အကောင်းဆုံးကစားသမား ၁၁ ယောက် စာရင်းမှာ စပိန်လာလီဂါမှာ ကစားတဲ့ ကစားသမား ၈ ယောက်ပါဝင်ပြီး၊ အီတလီ စီးရီးအေက ကစားသမား ၃ ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။
မစ္စတာ ဘလတ္တာက – ဒီအချက်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် လာလီဂါဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံး လိဂ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလန် ပရီမီယာလိဂ်ကတော့ ဈေးကွက်အရတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးလိဂ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပရီမီယာလိဂ်ဟာ ကောင်းပါတယ်။ ကစားသမားကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ၁၁ ယောက်ထဲမှာ ၁ ယောက်မှ မပါဘူးဆိုရင်တော့ ၊ တခုခုကို ပြောင်းလဲပြီး ကျင့်သုံးသင့် မသင့်ဆိုတာကို သူတို့အနေနဲ့ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
လာလီဂါ ကစားသမား ၈ ယောက်မှာ – ဘာစီလိုနာအသင်း နောက်တန်းလူ ဂျရာပီကေ၊ ကားလို့စ် ပူယိုးလ်၊ အလယ်တန်းကစားသမား ရှာဗီ၊ အန်ဒရေ အီနီယက်စ်တာ နဲ့ ရှေ့တန်းလူ လီယိုနယ်လ်မက်ဆီး နဲ့ ဒါဗစ် ဗီယာတို့ပါဝင်ပြီး၊ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းက ဂိုးသမား အီကာ ကာဆီးယက်စ် နဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရိုနာလ်ဒို တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အီတလီစီးရီးအေကတော့ ပြီးခဲတဲ့ နှစ် ဘောလုံးရာသီက ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ အင်တာမီလန်ကစားသမား မိုင်ကွန်၊ လူစီယို နဲ့ ရှနိုက်ဒါးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနည်းပြ ရောဘာတို မန်ချီနီက ကွင်းလယ်တောင်ပံကစားသမား ရှော်န်ရွိုက်ဖိလစ် (Shaun Wright-Phillips) အနေနဲ့ အသင်းပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
နည်းပြ မန်ချီနီက ရွိုက်ဖိလစ်အနေနဲ့အခု ဇန်န၀ါရီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာ အသင်းကနေ ထွက်သွားနိုင်ချေရှိတယ်လို့ ၀န်ခံပြောကြားလိုက်ပြီး၊ ရွိုက်ဖိလစ်ကိုလိုချင်လို့ နောက်ကလိုက်နေတဲ့ အသင်းတွေအတော်များများရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းမှာ ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတွေများနေတာကြောင့် ရွိုက်ဖိလစ်ဟာ ပုံမှန်နေရာမရဘဲဖြစ်နေတာပါ။
အသင်းဘယ်နောက်ခံလူ ၀ိန်းဘရစ်ခ်ျ (Wayne Bridge) ဟာ ၀က်စ်ဟမ်း (West Ham United) အသင်းကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောင်းသွားပြီး၊ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူး အာဒီဘာယော နဲ့ရိုကေးဆန်တာခရုဇ်တို့လည်း အသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။